रुबस प्रेमपत्र प्रतियोगिता २०७७ का उत्कृष्ट ६ प्रेमपत्र - Rubas News
रुबस प्रेमपत्र प्रतियोगिता २०७७ का उत्कृष्ट ६ प्रेमपत्र
Posted by Rubas News | २०७७ फाल्गुन २ | मनोरञ्जन, साहित्य |0|
मधुर मुस्कानका साथ तिम्री डल्लुको अपार स्नेह र माया तिमीलाई ।
तिम्रा यादहरुले सताए पछि तड्पिनु सिवाय अर्को विकल्प छैन मसँग । यो शरीर तिम्रै मायाका कारण आजका मितिसम्म बाँचिरहेकै छ । सलक्क परेको जिउडाल, मिजासिलो बोली, मधुर मुस्कानलाई भुल्नै नसकेपछि यो पत्रको साहारा लिदैछु तिम्रा यादहरुलाई कम गर्न, अल्छि नमानि एकपटक पढ ल ।
आँखामा आँसु र मनभरी पिर बोकेर आज पनि तिम्रै तस्बीर हेरेर दिन बिताएँ । शरीरमा एक थोपा रगत रहुन्जेल तिमै्र लागि धड्किने छ यो । विगत सम्झिँदा भक्कानो परेर आउँछ । भँथ्यौ नि जति टाढा भए पनि एकपटक सम्झनु आसपासमै भेटिनेछु । छातिमा हात राख्नु मुटुमै पाउनेछ्यौ । मनु आज हजार पटक सम्झिन्छु लाखौँ पटक मुटु भत्किन्छ । तिमि रुन नपाउँदै मेरो आँसु झर्थे तिमि आँसु त मोती हुन् नखसाऊ डल्लु…….. मलाई परेको समस्या म भन्दा पहिले तिमिलाई थाहा हुन्थ्यो । के आज पनि म रोएको खबर तिमिसम्म पुग्छ होला कि ? तिमिलाई आज कहानेर दुखेको छ ? आज तिमि किन खुसि छौ ? तिमिभन्दा पहिले म थाहा पाँउथे । हाम्रो जीवनमा एक्कासि यस्तो प्रकोप आयो भूकम्पले ढलेका संरचना पुननिर्माण भए, हुरीले उडाएका गाँउ टहरा महल बने, पहिरोले खाएको गाउँ पनि बिस्तारै तङ्ग्रियो तर हाम्रो सम्बन्ध तिम्रो खुसिको लागि संस्कारका साङ्ला तोड्न सकिनँ, मनभरी पीडा संगाले र मुटुमा सजाइराख्ने कोसिश भने जन्मौँजन्मान्तर गरिरहने छु ।
यी आँखाहरु तिम्रो बाटो हेरेर कहिले थाकेनन्, यी ओठहरुले तिम्रो लागि शुभेच्छा प्रकट गर्न कहिल्यै भुलेन्न्, भुल्यौ त केबल तिमिले मेरो दिलमा आउने बाटो……।
तिमि कम बोल्छ्यौ रे, यसरी तिम्रो समस्या कसले बुझ्छ ? समस्या त भने पो थाहा हुन्छ नि डल्लु भन्थ्यौ । कसरी सोधूँ अरुलाई फलानो ठाउँमा यो कार्यक्रम छ, कुन लुगा लगाऊँ ?, कुन क्लिप लगाए मेरो कपाल राम्रो देखिन्छ ? यो लिपिष्टिक सुहायो कि सुहाएन ? कसरी सोधूँ….?
तिमि जति टाढा भए पनि सदैव मेरै साथमा छौ जस्तो लाग्छ । तिमि हिड्ने बाटोका प्रत्येक ढुङ्गा पातहरुमा तिम्रै छाया देख्छु । हावाले पनि सुसेल्दै तिम्रै सन्देश बोकेर आएको जस्तो लाग्छ । तिम्रै साथ बिना धागो चुँडिएको चङ्गा जस्तै भएकि छु । यो जलेको मन बाट सदैव तिम्रो खुसीको कामना मात्रै निस्कने छ । तिमि सधैँ मुस्कुराइ रहनु मेरो शुभकामना………..।।
तिमिलाई अथाहमाया गर्ने डल्लु
आज तिमिलाई इमेल लेख्दैछु हरेक प्रणय दिवसमा विगत ७ वर्ष जस्तै । हरेक वर्ष ऋतुहरु परिर्वतन भए प्रणय दिवशहरु आए गए तर तिमि मेरो जिवनमा आएदेखि जुन बहार आएको छ त्यो म शब्दमा बयान गर्न सक्दैन ।
हाम्रो प्रेममा हामि विच, तिमि र म छुट्याउन नसकिने प्रेममा तिम्रो जस्तै समर्पण सायद यो संसारमा कुनै युवतीले गरेको होला । भौतिक रुपमा दुर भएपनि सधै मेरो मनको गहीराईमा तिमी अटल रुपले अडिएकी छौ ।
जिन्दगीलाई जिवन दिन हामीले गरेको लगानिले प्रतिफल दिन थालेको छ । नशाको दलदलमा फसेको मलाई तिमीले जिवन्त प्रेमको नसा सिकाएर जसरी बाच्न सिकायौ आज ठीक त्यसै गरी म सगैँ जिवन भुलेका चार जना साथिहरु सुनौलो भविष्यतर्फ अघी बढीरहेको देख्दा खुसीले हृदय थामीनस्कनु भएको छ ।
साथी विसाललाई समयमै बाटो देखाउन नसक्दा उसको मृत्युले परेको चोट तिमीले पनि म जत्तीकै महसुस गरेको म बुझन सक्छु प्रिय । तिम्रो अथाह प्रेमले जसरी मेरो सानो सँकुचित संसारलाई फराकिलो र विशाल वनाईदियो, मेरो धुवा भरीएको मुटुलाई प्रेमील वनाइदियो, त्यसैगरी कोही कसै एक जनाले पनि माया पायो अर्थात प्रेमको अर्थ बुझयो भने हाम्रो प्रेमले सार्थकता पाउने तिम्रो सोचले आज धेरै परिर्वतन देखेको छु । अब हाम्रो प्रेमले हजारौ प्रेम लाइ बाच्नुको अर्थ सिकाउनुपर्छ ।
जिवन प्रेम हो र प्रेमको गहिराई विशाल छ भन्ने तिम्रो विचारमा आज म पनि अडिएको छु ।
प्रणय दिवस त एउटा वाहाना मात्रै हो । यस्ता हजारौ बाहाना खोजेर जिवनका प्रत्येक क्षणलाई प्रेममय बनाउदै जाउला ल ।
जुन प्रेम आफैमा यति फराकिलो छ त्यसलाई म शब्दहरुले लेख्न सक्दैन भन्ने तिमिले बुझेकी छौ । त्यसैले आउ यो, प्रणय दिवशमा एउटा बाचा गरौ, ता कि `प्रेममा मर्ने होइन बरु प्रेमले त मर्न लागेकोलाई जिवन दिन्छ ।´ भन्ने मुल भावनालाई देशै भरी फैलाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
जातभात धनि गरीब भन्दा माथी प्रेमको सिंहासन भएको यर्थाथतालाई फैलाउदै अघी बढौला । ल त प्यारी अब काममा जाने तयारी पनि गर्नु छ । साझ काम सकेपछि भिडीयो कलमा बात गर्ने बाचाका साथ मिठो चुम्बन टक्र्याएर विदा हुन्छु ल ।
क्षितिज पारिवाट तिम्रो यादमा छोटो जीन्दगिका पाइलाहरु घडीको सेकेण्डको सुइ संगै विताइरहेको छ डल्लु धेरै लामो समय पछि आज यो सेतो कागजमा कालो हक्षरहरुले यो कागजलाई मुल्यवान वनाउने प्रयासमा छु । प्रिय डल्लु भौतिक शरीर जति टाढा भयो त्यति नै मायाका छालहरु तिव्र गतिमा आउदा रहेछन् । दिनमा ८६४०० सेकेण्ड तिम्रै यादमा तड्पिरहन्छु । दिन भरीको यो पोल्ने घाममा काम गर्दाका काला डामहरु बेलुका तिम्रा यादहरुले सबै हराउछन् डल्लुः
डल्लु तिमिलाई थाहा छ म विदेश जान्न भन्थे तिमी भन्ने गथ्र्यौ बाबु विदेश जानु भन्दा भोकै बसुला भनेर आज रहरले हैन् करले यो विदेश भुमिमा पाइला टेक्नुपर्यो हजुरबुबाले गाडेको रिन बुबाको टाउको थुपारीयौ, भोली बुबाको टाउकोमा भरीएको रिन मेरो र छोराहरुको टाउकोमा नजाव्स भनेर म यँहा पुगे । जसो तसो यो रिन तिर्न सम्म मात्र बस्छु त्योपछि विदेश फर्केर पनि हेर्दैन् भोलीको सन्ततिलाई विदेशको कल्पना सम्म गर्न दिदैन् डल्लु प्रत्येक हप्ता आउने तिम्रो चिठिले मलाई एक हप्ता काम गर्ने उर्जा थपिरहन्थ्यो तर आज तीन हप्ता जति भयो तिम्रो कुनै खबर आएन यो मुटु भतभति पोलीराखेको छ , मनमा अनेक सोचाइ आइरहेको वेला एक्कासी पल्लो घरको रामेको फोन आयो जुन मेरो लागी फोन नभएर भुकम्प जस्तै भयो………..। तिम्रो विहे हुदैछ भन्ने कुराले मलाई सामाजिकताको पाठ त सिकाइरहयो तर जीवनको वाटोमा हिड्दा हिड्दै धरहरा वाट खसेको आभास पनि भइरह्यो डल्लु तर जीन्दगिमा सदैव तिम्रो हुनेछु माया तिमिलाई नै गरिरहने छु भन्ने बाचाका साथ वैवाहीक जीवनको उत्तरोउत्तर शुभकामना घल्लु………………।
उहि तिम्रो प्रिय बाबु
मन भित्र सजाएर राखेको छु उस्का यादहरु ! तारिफ गरिरहन मन लाग्छ अझै पनि,थाहा छ उस्को मनमा अब अरु कोहि नै छ ! र पनि विवश छु,,, मेरो मन भित्र उसलाई पाउने झिनो आशा को दियो बलिरहेको छ….!! यसरी सुरु हुन्छ मेरो प्रेम गाथा…!! प्रिय सानि,,,,,२३ औ वसन्त पार गरिसक्दा सम्म भए होला कति संग आकर्षण को माया,आँखा जुदाजुध, केही उता का गल्ती केही मेरा गल्ती !! तर त्यो पहिलो दिन थियो तिमी तिम्रो मामा घर को झ्यालबाट नियालेर हेर्दै गर्दा मेरो नजर तिमी माथी परेको ! कस्तो अनौठो संयोग त्यही दिन बेलुका हाम्रो लजाउदो तरिका को भेट ! र अर्को दिन तिम्रो जन्म दिन ! पहिलो भेट भएकै दिन तिम्लाई जन्म दिन को सुभकामना दिन पाउँदा म निकै खुसी थिएभोलि पल्ट तिम्रो जन्म दिनमा मेरो मायाको चिनो सहित तिम्लाई गिफ्ट दिने आट ! अहो ! सझिदा अझै शरीर जिरिङ भएर आउँछ !! तिम्लाई हाम्रो माया को लागि स्वतन्त्रता थिएन, तिमी आफ्नो पढाइ मा निरन्तरता दिने उमेर कि थियौ र पनि भेट्न आउथियौ हरेक साझ केही न केही बाहाना बनाएर !! ,,,,,,उस्को छेउमै बसि रहन मन लाग्थ्यो घन्टौ समय पनि मिनेट,सेकेन्ड जस्तै लाग्थ्यो चाहे आफू भोकै किन नबसु भरिन्थ्यो पेट उस्को खाएको देख्दा..सानि तर विवश छु आज उसले मेरो माया लाई मेरो जात सम्झी किन कि म यो समाजको उपज निच बर्ग मा पर्छु र उ उच !! दिन हरु बित्दै गए अहिले फेरि पोहोर साल को भ्यालेन्टाइन डे फेरि पनि फर्केर आएछ तर मेरो सानी फर्किने आट मन बाटै हट्दै गैइरहेको छ । देखिरहन्छु यो सहर को भिड मा उस्को हात कसै संग हुन्छ धड्कन मेरो बढ्छ ! फेस्बुक स्टाटस कसैका लागि हुन्छ खुसी मलाई मिल्छ ! दु:ख उसलाई पर्दा पीडा मलाई हुन्छ,,,,कहिलेकाही केही सब्द लेख्थे उस्को लागि मेट्टाउथे ,फेरि लेख्थे फेरि मेट्टाउथे ! उफ ! शब्द मा बयान गर्ने लाएक थिएन उस्को सुन्दरता ! र भन्थे शब्द मेट्टिए जस्तो हाम्रो सम्बन्ध कहिले न मेट्टियोस ! तर आज खै तै भएरहएको छ…!! था छैन मेरो यो अधुरो प्रेम कहिले सम्म चलिरहन्छ,,,,,, उहि तिम्लाई दिल बाट हटाउनै नसक्ने प्रेमयात्री
प्रेममा परेपछि कलम समाउन पनि मन लाग्दो रहेछ। यो मेरो पहिलो प्रेम पत्र तिमीलाई लेख्दै छु। तिमीलाई पनि थाहा नै छ, म कुनै साहित्यकार होइन। तर अलिकति लेख्न रुचि राख्दछु। सुन न मेरो मनमा थुप्रो कुराहरु छन्; भन्न सक्दिन तीसबै कुरा यसै पत्रा मार्फत भन्न चाहन्छु। मेरो प्रेम पत्रलाई मेरो बच्चापन नठान्नु ; यसलाई तिम्रो मनबाट स्वीकारी दिनु है।
तिमीलाई के ढाट्नु? सुरुमा देख्ने बित्तिकै तिमीलाई मन पराएकी पनि हैन। सुरुमा त तिमी एकदमै पछि लाग्ने थियौँ ,नी। अहिले मलाई पनि आफ्नो पागलप्रेमी बनाइ सक्यौ। म पनि कसैलाई यस्तो गहिरो माया गर्न थाल्छु भनेर सोचेकी थिइन। प्रेममा पर्दा कति रमाइलो हुदो रहेछ। आफूलाई मन पराईदिने, आफ्नो वास्ता गरिदिने, आफ्नो सुख-दुखको ख्याल राखिदिने कोही व्यक्ति छ भन्ने आफूलाई एकप्रकारको न्यानो अनुभुति हुदो रहेछ । त्यो न्यानो अनुभुतिका लागी तिमी धन्यवाद। तिम्रो एकदम माया लाग्न थालेको छ। जतिबेला पनि टोलाएर बस्छु । तिम्रो कल्पनामा डुबेकी हुन्छु। आखा चिम्म पर्दा पनि तिम्रै तस्वीर मेरो सामु कोरिन्छ। भन्न त केही भन्दिन तिमीलाई तर तिमीसग प्रेममा परेदेखि म मा धेरै परिवर्तन भएको छ। म झन् बुझ्ने भएकी छु, प्रेमलाई बुझ्ने। सुरुमा त खुब बेवास्ता गरे तिमीलाई; कति चित्त दुखाए तिम्रो। तर म सही रहेछु। तिमी रिसाएर मबाट टाढा हुन पनि सक्थ्यौ नी । तर तिमी मलाई प्रेम गरिरयौ। यही कारण आज म तिम्री भएकी छु। त्यी दिनहरुका लागी क्षमा माग्दछु।
पुराना घाउहरु कोट्याएर के बस्नु? अव हाम्रो सुनौला दिनहरु सुरु भएका छन्। माया, म तिमीलाई मैले आफ्नो संसार बनाई सकेकी छु। तिम्रो बोलचाल, रुप, रङ्ग, सबै प्रति म आकर्षित छु, मेरो मन आकर्षित छ। लौ न! खै गरेउ? तन्त्र, मन्त्र ले हो की? के ले हो? म तिमी प्रती यस्तो मोहित भएकी। पक्कै पनि तिम्रो त्यो निस्वार्थ मनले होला। तिमी त कहिले काही सानो बाबु जस्तो लाग्छौ। सानो बालक जसको मुखमा साचो बोली र अनुहारमा सोझोपन हुन्छ। तिमीलाई देख्दा एउटा अर्कै प्रकारको रमाइलो महसुस हुन्छ। माया! तिमीले मलाइ हेर्दा म निहुरिन्छु; नभए त मेरो मुस्कानले मेरो मनको चञ्चलता बताई सक्छ। मोवाइलमा घण्टी बज्दा तिम्रै कल होस् जस्तो लाग्छ। म्यासेन्जर खोल्ने बित्तिकै तिमी अनलाईन भएको हौ जस्तो लाग्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै र राति सुत्नु अघि म तिमीलाई नै सम्झन्छु ।
हो। म सानो सानो कुरामा रिसाउछु, झगडा गर्छु, रुन्छु। तर माया, साच्चै भन्नु पर्दा यी त मेरा बाहाना मात्रै हुन्। तिमीले फकाउदा एकदम रमाइलो लाग्छ। तिमीले फकाउदा झन् धेरै माया गर्छौ कि जस्तो लाग्छ तर माया त जति बेला नी धेरै नै गर्छौ नी, है।
प्रेमकथा त थुप्रै पढेकी छु सुनेकी छु। तर म आफ्नो प्रेमकथा कसैसग दाज्न चाहन्न। जस्तो छ त्यसैमा एकदम सन्तुष्ट छु। माया, मैले तिमीसग जिन्दगी बिताउने सोचेकी छु यसैगरी तिम्रो साथ पाएछु भने त्यो सम्भव पनि छ। तिमीसग हुदा समय त्यही रोकिन्छ जस्तो लाग्छ। तिम्रो अङ्गालोमा हुदा सुरक्षित महसुस गर्छु म। माया, तिमी कहिले मबाट टाडा नजाउनु है! तिमी बिना बाच्न सक्दिन अब म।
म प्रेमपत्र मै त यति भावुक भइ सके, झन तिम्रो सामु आफ्ना भावना राख्नु परे त रुदै तिम्रो अङ्गालोमा परि सक्थे। अनि फेरी मेरो त बाहाना नै भनौ, तिमीले फकाउनु पर्थ्यो मलाई। तिमीले मलाई किन मन पराउन पुग्यौ थाहा छैन। म मा के देख्यौ, खै? तिमीले मलाई एकदम धेरै माया गर्छौ। तर म तिमीलाई त्यो भन्दा धेरै गर्न थालेकी छु। तिम्रो सबै दु:खलाई मेरो सबैफकठिनाई लाई हाम्रो बनाएकी छु। तिमी दु:खी हुदा मेरो मन रुन्छ मलाई केही हुदा तिमी चिन्ता हुन्छ। तिमीलाई एकछिन देख्न नपाउदा म अत्तालिन्छु। तिमी हार्दा, मलाई पिर पर्छ। तिमी लड्दा मलाई दुख्छ। तिमी र म हामी भैसकेउ जस्तो लाग्छ।
माया, मैले यी कुराहरु पहिले भनेकी हैन अर्थात भन्ने मौका पाएकी छैन। म एक प्रेमी हो, मेरा शब्दहरु सच्चा मनका हुन्। म वाचा गर्दछु जस्तो दु:ख सुखमा पनि तिम्रो साथ नछोड्ने। मेरो जीवन त मैले तिम्रो नाम गरिसके। आज प्रेम दिवसको मौका पारेर मैले आफू भित्र लुकेका कुराहरु तिम्रो सामु पस्केकी छु। आशा गर्दछु तिमीले यस प्रेम पत्र मार्फत मेरा मनमा गुम्सिएका भावनाहरुलाई बुझ्यौ होला। अव म तिम्रो प्रेम पत्रको प्रतिक्षामा रहने छु।
उही तिम्री मायालु
कति निस्वार्थ छे पानि ले भरिएकी तलाउ । एक नजर ले त्यो निलो आकास ,तेइ निलो आकस को बर्सी रहेको पानी अनि तेसैको चट्याङ परेको रुप सिवाये केही हेर्दैनि।कति शान्त र एकाग्र छ उस्को प्रेम त्यो आकाश सङग । प्रेम मा दुरि को वास हुदैन भन्ने अब्बल पाठ सिकाएकी छे तलाउ ले..कुनै पछुतो छैन उस्लाइ ताढा हुनुको र पनि छाती भरी तेइ आकश कै बिम्ब सजायेकी छे ..बिम्ब आफ्नो प्रेमी को तस्विर को ..तर आभागी त तब भैदिन्छे उ जब गृस्म मा सुकेर त्यो तस्बिर नै बिलिन हुनजान्छ र पनि चुप्चाप पर्खिरहन्छे । सायद आकश को प्रेम नि चोखो छ पक्कैपनी ..तेसैले त गृस्म मा जलिरहेकी प्रेमिका लाई भिजाउन आफू रोइन्दिन्छ आकस र फेरि खुसी हुन्छे तलाउ ..खुसी आफू भिज्नु को भन्दा पनि आफ्नो प्रेमी को तस्विर पुन सजाउन पाउदको हो । एस्तो लाग्छ कि सारा जीवन उस्ले तेइ आकश लाइनै सुम्पिसकी छ सदा सदा का लागि । तर जब कोहि उस्को एकाग्र प्रेम्को तप्स्या लाई ढुङ्गा फ्यालेर भङ्ग गराउछ .केवल चिच्याएर आवज सिवाये केही निकाल्दैनी .सायद त्यो ढुङा लाई माथी फ्याक्न केही पानी का छिटा त उछलिकी हो तर लाचार छे तलाउ सक्दैनी त्यो पनि ..उछलेका पानी का छिटा गिज्ज्यौदै उसैमाथी पर्न जान्छन तर पनि येति दानी र निर्मल छे उ कि चोट पुर्यौने ढुङ्गा लाई नि वास दिन्छे र बिलिन हुन जान्छ त्यो ढुङ्गा किनकी सायद उस्ले सधै आफ्नै प्रेमिको आकर मात्र खोजेकी छ आफुमा । कति निसब्द छ प्रेम यिनिहरुको. ना त गुनसो छ ..ना कुनै संखा ..ना त छ कतै बियोग र ना कतैअरु चाहना ..बस छ त केवल “समर्पण”।
( आकास : नेपाल मा बस्ने ४५ बर्षिय बिनय साही !
तलाउ : बम्बाई को कोठी मा काम गर्ने ३५ बर्षिय संगीता चौधरी !
तलाउ मा फालिने ढुंगा : संगीता का कस्टमर हरु !
बिनय संगीता को बालख बेला देखि को प्रेम हो ! जिन्दगि ले संगीता लाइ १८ वर्ष को उमेर मै बम्बाई को कोठी मा पुगायो र बिनय लाइ जिन्दगि ले सम्पन्न परिवार दिएर नेपाल मै बसायो | तर पनि हरेक वर्ष को एक चोटी बिनय संगीता लाइ भेट्न भनेर बम्बाई जाने गर्दछ !
यसै परिबेस मा संगीता ले बिनय लाइ लेखेको प्रेम पत्र !)
Previousललिता निवास जग्गा प्रकरण : माधवकुमार नेपालबारे प्रमाण बुझ्न सर्वोच्चको आदेश
Nextकञ्चनपुरका चिनी मिललाई उखुको अभाव
पुषे पन्ध्रको विशेषता र सान्दर्भिकता
बाल कविता(प्रस्तावित )
जिन्दगिको वर्णमाला र मेरो देश